दुई जना संक्रमित हुँदा लकडाउन २० हजार पुग्दा खुला, गल्ती पहिले कि अहिले ? - Pura Samachar
दुई जना संक्रमित हुँदा लकडाउन २० हजार पुग्दा खुला, गल्ती पहिले कि अहिले ?
काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमित दुईजना हुँदा लकडाउन गर्‍यो भने २० हजार संक्रमित पुग्दा लकडाउन खुला गरेको छ । यस विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको माग छ ।
चार महिने लकडाउनको समीक्षा गरिनुपर्ने बताउँदै प्रवक्ता विशवप्रकाश शर्माले बुधबार लगातार तीनवटा ट्विट गरेर भनेका छन्, “लक डाउन र खुला । हिजो गल्ती कि आज ? लकडाउन गर्दा सबैले सरकारलाई सघायौं, फरक मत राखेनौं । @Pm_Nepalसमीक्षा गरौं, संक्रमित २० हजार पुग्‍न लाग्दा खुला गर्न सकिन्छ भने संक्रमित केवल दुई हुँदा लक डाउन गरेर हामीले सही गरेका रहेछौं कि गल्ती ?”
कोरोनाको प्रसार रोक्न सरकारले लगाएको चार महिना लामो लकडाउनले अर्बौंको अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले उपलब्धी भने केही हासिल नभएको पनि दाबी गरेका छन् ।
“१२० दिनको उपलब्धी र क्षति ! सत्तारूढ पार्टीको प्रवक्ताले उपलब्धी राख्नुहोला । स्वास्थ्य सामग्री अपर्याप्त, खरिदमा भ्रस्टाचार । मरेपछि पीसीआर । क्वारेन्टाइनमा मृत्यु, आत्महत्या र बलात्कार । अर्थतन्त्रमा अर्बौंको क्षति । हात लाग्यो शून्य,” उनले भनेका छन् ।
लकडाउन अवधिमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता संघर्षमा लागेको प्रवक्ता शर्माको आरोप छ ।
“कोरोनाका नाममा लकडाउन, सत्ता संघर्ष बढी ! दुई विवादास्पद अध्यादेश । एउटा दल फुटाउने षड्यन्त्र । सांसद अपहरणको मुद्दा,” उनले प्रधानमन्त्री ओलीले चलाउँदै आएको ट्वीटर ह्यान्डलमा मेन्सन गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘@Pm_Nepal विवादास्पद अभिव्यक्तिहरु । राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग । जनता मर्नु मरिरहे, संक्रमण बढ्नु बढी रह्यो, कमरेडहरुको सत्ताद्वन्द चलिरह्यो ।”
सरकारले चैत ११ गतेदेखि जारी गरेको लकडाउन साउन ७ गते खुला गरेको छ । भदौ १ देखि देशभर लामो दूरीका यातायात सञ्‍चालनमा आउनेछन् ।